Sidee loo sameeyaa dhadhanka sanduuqa dhadhanka guriga (5 talooyin) - Blog
Sida loo sameeyo isku darka sanduuqa dhadhaminta guriga 5 talaabo oo sahlan
Sidan ayaa loo sameeyaa dhadhanka macmacaanka ee guriga lagu sameeyo. Ragga waad ogtahay, qofna ma jecla keeg laga sameeyay xoq in ka badan aniga! Laakiin mararka qaarkood, waa inaan bustay isku-darka sanduuqa. Caadi ahaan keega jilicsan ee casaanka ah ama doolshe shukulaato ah markaan rabo dhadhan fiican laakiin waqti uma haysto inaad ka xoqdo xoqida. Ama waxaa laga yaabaa in aanan gacanta ku wada haynin maaddooyinka aan u baahanahay. Taasi wax badan bay dhacdaa.
Laakiin weli waxaan rabaa dhadhankaas macaan! Runtii ma jecli dhadhankaas 'kiimikada' ah ee ka iman kara sanduuqa toosan ee kor loo qaado haddaba halkan waa kuwan talooyinkayga ku saabsan sida loo sameeyo sanduuq isku qasan dhadhamiya guriga.
Ha ka baqin isku darka sanduuqa
Waxaa jira dood aan dhammaad lahayn oo ku saabsan waxa wanaagsan, sanduuq isku qasan ama dubista xoqida. Sidaas darteed dad badan ayaa u geli doona dagaal xaq u dirir ah dhimashada midkan. Si daacadnimo ah, yaa daneeya?
keegga cuntada malag leh miro macmacaan ah
Adeegsiga sanduuqa isku qasan adigaa iska leh. Xaqiiqdii waa goyn-gaaban iyo mararka qaarkood ikhtiyaarka ugu fiican. Qaar badan oo ka mid ah xirfadleyaasha qurxinta keega ee halkaas ku jira ayaa ku isticmaala sanduuqa isku dhafka ah ee doolshooyinka oo dhan. Waxaad heleysaa natiijooyin isdaba-joog ah waana hab sahlan oo isku-dhafan.
Waxa kaliya ee aan kuu soo jeedin lahaa waa inaad ka hor mariso macaamiishaada. Meelaha qaarkood, cidna malaha haddii aad sanduuq isticmaasho ama haddii aad keeg ka sameysid xoq. Laakiin aaggayga (Portland) dadku aad ayey uga walaacsan yihiin waxa ay gashanayaan jirkooda (Portlandia is real ya'll).
Macaamiisha ayaa runtii i soo diri doona si aan u xaqiijiyo in aan wax ka dubto. Marka waxaan hubaa inaan ku ridayo macluumaadkaas degelkeyga sidaas darteed su’aal ma taagna. Haddii aad isticmaaleyso sanduuq isku-dhafan oo laqiyaasey maahan inaad ku tiraahdid ereyo aad u tiro badan. Waxaad si fudud u sheegi kartaa 'duban maalinle cusub' iyo haddii aad hayso baaritaan gaar ah oo ku saabsan dubista xoqida, kaliya daacad noqo.
Haddii aad rabto raashin dheeri ah oo ku saabsan sida wax looga dubo xoqida, hubi tijaabintayda iyo runteyda cuntada keega on Sugar Geek Show.
Talada # 1 ee ku saabsan sida loo sameeyo isku darka sanduuqa dhadhanka guriga lagu sameeyo
Ka bilow isku darka sanduuqa ugu fiican ee suurtogalka ah. Waxaan ahay gabar Duncan Hines ah naftayda. Qiimaha ayaa waxyar ka qaalisan kan sanduuqa isku dhafan ee aadka u jaban laakiin waxaan aaminsanahay inaad heshay waxaad ku bixisay. Maaha in la sheego Duncan Hines badiyaa waa la iibinayaa markaa kaydso dhadhankaaga ugu sarreeya oo ku raaxee dhammaan muuqaalka qosolka leh ee aad ku heli doontid markaad iska hubiso.
Duncan Hines-ka aan ugu jeclahay sanduuqa isku dhafka ah waa Red Velvet, Shukulaatada Triple, Cake White (sameynta WASC) iyo strawberry. Waqti ma heli karo duncan hines strawberry sidaa darteed waxaan raaci doonaa Betty Crocker. Kuwani dhammaantood waa cuntooyin qaata wakhti qaadasho si ay uga soo sameeyaan xoqdo waana dhadhanka ugu badan ee laga codsado macaamiishayda. Noocyada shukulaatada ee cuntadani iska hubi my Cunto WASC Chocolate ah
Talada # 2 ee ku saabsan sida loo sameeyo isku darka sanduuqa dhadhanka guriga lagu sameeyo
Badanaa isku-darka sanduuqa ayaa leh maaddooyinka soo socda ee ku taxan dhabarka ay rabaan inaad ku darto. Ukunta, biyaha iyo saliida. Tani waa mid caqli-gal ah dhammaadkooda maxaa yeelay si aad u qurux badan qof walba ayaa ku jira maaddooyinkan gacanta horeyba ugu jiray.
Waxyaabaha ku saabsan maaddooyinkan inkasta, wax badan kuma daraan keega illaa inta dhadhanku u socdo.
Ku beddel biyaha caano si aad ugu hesho dhadhan iyo qoyaan badan. Haddii aad sameysid maro jilicsan oo casaan ah waxaad isticmaali kartaa caano subag.
Saliida ku beddel sabdo dhalaalay dhadhan iyo dusha guriga
Keegga shukulaatada, iskuday inaad ku bedesho biyaha kafee qabow. Kafeeku wuxuu xoojiyaa dhadhanka shukulaatada! Hel qashinka Shukulaatada WASC
Talada # 3 ee ku saabsan sida loo sameeyo isku darka sanduuqa dhadhanka guriga lagu sameeyo
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay WASC (keeg cad oo yicib la kariyey) oo la yaabay waxa uu yahay. Asal ahaan waa habka ugu fiican ee la isku daro sanduuqa isku dhafan ee waqtiga oo dhan. Dhadhanka, dhadhanka iyo dhadhanka keegani waa IN LOO DHIMO. Layaab ma leh in ay tahay qaabka cuntada ee la doorto marka aad u baahan tahay keeg cad oo kaamil ah kuwa wax duba.
Sida loo sameeyo WASC
Ka bilow hal sanduuq oo ah isku darka Duncan Hines
Ku dar hal koob oo bur ah AP
1 koob oo sonkor ah
1/4 tsp cusbo
1 koob oo labeen dhanaan
1/2 koob oo sabdo dhalaalay
1 koob oo biyo ah ama caano ah
4 ukun cad
1 tsp soosaarida yicibta
Dhig dhammaan walxahaaga weelka baaqigaaga qaso (ama waxaad ku qasan kartaa gacanta) kuna walaaq hoose si aad isugu darsato illaa inta aad ka qoyneyso. Ka dib ku dhufo ilaa xawaare dhexdhexaad ah iskuna qas 2 daqiiqo si aad u horumariso qaabka iyo qaabka keega.
Ku shub batterigaaga dheryahaaga diyaarsan. Waxaan jecelahay inaan isticmaalo a sii deynta guriga lagu sii daayo (keega goop) . Siidaynta digsiga guriga lagu sameeyo ee ugu fiican ayaa jira! Ku karis 350ºF ilaa 35-40 daqiiqo ilaa caday ka soo baxdo xarunta si nadiif ah.
Jooji gebi ahaanba kahor qurxinta. Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan qurxinta keeggaaga ugu horreeya, hubi tababbarkayga bilaashka ah ee ku saabsan sida loo sameeyo keeggaaga ugu horreeya.
Talada # 4 ee ku saabsan sida loo sameeyo isku darka sanduuqa dhadhanka guriga lagu sameeyo
Ka samee dufankaaga subagga kasoo xoq. Waan ogahay inay tani u muuqato mid caqli-gal ah maxaa yeelay waxaan isku dayeynaa inaan halkaan fudud ugu tagno. Waxaa laga yaabaa inaadan waligaa ka hor samayn subag macmal ah oo guriga lagu sameeyo oo aad cabsi gelisay. Hagaag aan maskaxdaada dejiyo.
My cunto fudud buttercream waa wax fudud, waxaa laga yaabaa sidoo kale in la khiyaaneeyo. Si fudud u dhig dhammaan walxahaaga baaquli, ku karbaasho illaa ay ka khafiifsan tahay oo qalafsan tahay. Ka dib ha ku qasnaato inuu ku hooseeyo lifaaqa suufka 10 daqiiqo si looga takhaluso goobooyinka.
sida loo sameeyo dukaanka iibsaday isku darka keega oo qoyan
Voila, qabow subag fudud oo fudud.
Jid ahaan, jid ahaan, WAY ka fiican yihiin qabowgaas ka soo baxa daasadda. Waa maxay xitaa taasi?
Fursadaha kale ee dhaxan weyn adiga kuu ah
Qaboojiyaha farmaajo xasilloon
Kareemka xasilloon ee xasilloon (waa hagaag hal keeg oo heer sare ah oo aan lahayn jacayl)
Caanaha subagga Mareykanka
Talo # 5 oo ku saabsan sida loo sameeyo isku darka sanduuqa dhadhanka guriga lagu sameeyo
Aad u waalato waxyaabo aad buuxisay! Waxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad ka sameysid keegaaga xoq laakiin inta badan buuxinta keega waxaa laga sameyn karaa xoq waana ay fudud yihiin.
Iskuday kuwan kafiican ee doolshadaada
Qumbaha pecan buuxinta
Eeg, taasi ma ahayn mid aad u adag ma ahayn? Waxaad ku socotaa sameynta keeg macaan oo laga sameeyay sanduuq. Ma haysaa talooyin ku saabsan sida loo sameeyo isku darka sanduuqaaga ee dhadhanka guriga loogu sameeyo? U daa iyaga faallooyinka!
Cunto kariska Doctored Box Cake (WASC)
▢1/2 tsp (1 tsp) soo saar yicib
Tilmaamaha loogu talagalay keeggan waa kuwo aad u fudud. Asal ahaan, dhammaan walxaha ku rid baaquli kuna qas xawaaraha dhexdhexaadka ah 2 daqiiqo! Voila! Dufanka keega waa diyaar. Ku shub baytari laba diyaaradood oo '8' ah oo ku kari 350ºF 30-35 daqiiqo ama ilaa cadayga la galiyay uu nadiif ka soo baxo
sida si fiican loo dhaxanto keega
berry chantilly keega cuntooyinka oo dhan dib u eegis
sida loo sameeyo beenta ciridka adag
Cunto kariska miraha cufan oo caafimaad leh laga soo bilaabo xoq